Media Group – မီဒီယာလုပ်ငန်းများ | MoeMaKa Burmese News & Media
Category: Media Group - မီဒီယာလုပ်ငန်းများ All Categories Bago - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး Central USA - အမေရိကန်အလယ်ပိုင်း Civil Society Groups - အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ Educational - ပညာရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ Mandalay - မန္တလေးလမ်းးညွှန် Market Place - ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် MoeMaKa Network - မိုးမခနဲ့ မိတ်ဆွေများ Religious Center - ဘာသာရေးဆိုင်ရာ San Francisco Bay Area - ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ Tour & Travel - ခရီးသွား
မိုးမခ၏ ပင်တိုင်ဒီဇိုင်းဆရာ - Moe Z DZai ကြော်ငြာ စာစောင် စာအုပ် ဒီဇိုင်း လေးအောက် စာဖောင်ဖွဲ့ ပုံနှိပ် စာအုပ်ထုတ်သည်အထိ အစအဆုံး အလုပ်အပ်နိုင်သည် Moe Htet Hlaim 09-250-543-775 moezdzai@gmail.com FB - Moe Z Dzai...
Yangon Book Plaza ဆိုတာ စာအုပ်ဆိုင်များစွာ စုစည်းထားတဲ့ စာအုပ်ပလာဇာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရသ၊ သုတ စာပေဆိုင်ရာ စာအုပ်မျိုးစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာ အပြည့်စုံဆုံး ရွေးချယ်ဝယ်ယူရနိုင်မယ့် ပလာဇာကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Yangon Book Plaza ကြီးမှာ ဘာဆိုင်တွေရှိသလဲ၊ အဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာ ဘယ်လိုစာအုပ်အမျိုးအစားတွေ ရနိုင်မလဲဆိုတာကို အနည်းငယ် လမ်းညွှန်ပေးလိုပါတယ်။ ၁။ WE Books Store ငါတို့စာပေနဲ့ Exit Book တိုက်တွေက ထုတ်ဝေထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အားလုံး WE Books Store မှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြား စာအုပ်တိုက်အသီးသီးက ထုတ်ဝေပြီး ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ၊ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ တရားဓမ္မစာအုပ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ၊ ရသစာအုပ်တွေ၊ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ အပြင် နိုင်ငံတကာက မူရင်း အင်္ဂလိပ် စာအုပ်တွေကိုပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရပ်နီး/ ရပ်ဝေးက မိမိတို့ရဲ့ ချစ်သူ၊ ခင်သူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီ စာအုပ်လက်ဆောင် ပေးပို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်း WE Books Store မှာ အပ်နှံပြီး ပေးပို့ခဲ့လို့ ရပါတယ်။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ ၂။ စာပေလောက စာပေလောက စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်တွေ အပြင် အခြား စာအုပ်တိုက်တွေက ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်တွေကိုပါ ရောင်းချပေးလျှက် ရှိတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ထုတ်ဝေလျှက်ရှိတဲ့ စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်က ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ကြီး ဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ကောင်းပေါင်း မြောက်များစွာကို တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံလင်ဆုံး ရရှိနိုင်မယ့် စာအုပ်ဆိုင်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ ရွှေရည်ဦး စာပေ ဦးသန်းဝင်း ရေးသားသော ပန်းသီးစားပြီး သည်းခြေကျောက် ဖယ်ရှားနည်း စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေတဲ့ ရွှေရည်ဦး စာအုပ်တိုက်က ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရည်ဦး စာအုပ်တိုက်ထုတ် စာအုပ်များအပြင် အခြားတိုက်တွေက ထုတ်ဝေတဲ့ သုတ/ရသ စာအုပ်များကိုလည်း ရောင်းချပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ၅။ နှစ်ကာလများ၊ ၀ါးလည်၊ The Key Collection ဒီဆိုင်ကတော့ နှစ်ကာလများ စာအုပ်တိုက်၊ ၀ါးလည် စာအုပ်တိုက် နဲ့ The Key Collection စာအုပ်တိုက် တို့က တစ်ဆိုင်တည်းမှာ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချ ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ကာလများ စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေလျှက်ရှိတဲ့ ကဗျာစာအုပ်တွေ၊ ကဗျာဗေဒနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ စာပေအနုပညာရေးရာ စာအုပ်တွေ၊ ၀ါးလည်က ထုတ်ဝေတဲ့ အတွေးအခေါ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ၊ ကဗျာဗေဒနဲ့ စာပေအနုပညာ စာအုပ်တွေ၊ The Key Collection က ထုတ်ဝေတဲ့ ဘာသာပြန် သုတ/ရသ စာအုပ်တွေ ကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရောင်းချပေးလျှက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆။ ကောင်းဆုသာ စာပေ ရသ၀တ္ထုတို/ ၀တ္ထုရှည်တွေကို ဦးစားပေး ထုတ်ဝေလျှက်ရှိတဲ့ ကောင်းဆုသာ စာပေက ထုတ်ဝေလျှက်ရှိတဲ့ စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို ရောင်းချပေးလျှက်ရှိတဲ့ ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းဝင်ခွင့် ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကိုလည်း ရောင်းချပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ ၇။ ကျော်မွှေး စာအုပ်တိုက် ကျော်မွှေးစာအုပ်ဆိုင်ကတော့ ကဗျာစာအုပ်တွေကို အဓိကထားပြီး ထုတ်ဝေတဲ့ ကျော်မွှေးစာပေက ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီး ထိုစာအုပ်တွေ အပြင် အခြားအနုပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၈။ ရွှေလက်ဆောင် ရွှေလက်ဆောင်ဆိုင်ဆိုတာ မြန်မာ့ပညာရေးလောကမှာ သင်ထောက်ကူ စာအုပ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစုံလင်ဆုံး စာအုပ်တိုက်တစ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ မူကြိုအဆင့်ကနေ ဘွဲလွန်အဆင့်ထိ သင်ထောက်ကူစာအုပ်တွေ၊ အထူးထုတ်စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေလည်း ရှိသလို IELTS၊ TOFEL နဲ့ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အတန်းသစ်တက်တော့မယ့် ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း သင်ရိုးညွှန်းတန်း ဖတ်စာအုပ်တွေ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၉။ ကိုနေမန်း စာပေ ကိုနေမန်း စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ ကိုနေမန်း၊ မြတ်ငြိမ်းတို့ ရေးသားတဲ့ စာအုပ်တွေအပြင် အခြား လူငယ်အကျိုးပြု ကြီးပွားတိုးတက်ရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူ လူငယ်တွေအတွက် အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုစာအုပ်တွေကိုပါ ရောင်းချပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ ၁၀။ ဂလိုဘယ်အလင်း+ မိုးသိင်္ဂီ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို စာအုပ်တိုက်များကို အစုံလင်ဆုံး ထုတ်ဝေထားတဲ့ ဂလိုဘယ်အလင်းစာပေမှာတော့ ရာပြည့်တိုက်ထုတ် စာအုပ်တွေကိုလည်း တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံလင်ဆုံး ရရှိနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးသိင်္ဂီ စာအုပ်ဆိုင်မှာတော့ မိုးသိဂီင်္တိုက်က ထုတ်ဝေတဲ့ ဆရာမိုး (Follow Me ) စာအုပ်များကို ရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁။ ရန်အောင် စာပေ-၂ ရသစာပေမြတ်နိုးသူများ ဦးဦးဖျားဖျား သွားရောက်သင့်တဲ့ ဆိုင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဆွေဦး၊ ချစ်ဦးညို၊ တင်မောင်မြင့်၊ ရွှေကူမေနှင်း အစရှိတဲ့ ရသ အရေးကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာကြီးများရဲ့ စာအုပ်များစွာကို ပင်တိုင်ထုတ်ဝေထားတဲ့ တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားတိုက်ထုတ် ရသ ဦးစားပေး စာအုပ်များကိုပါ တင်ထားတဲ့ တိုက်တစ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂။ စာပေခရီးသွားများ စာပေခရီးသွားများ စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေလျှက်ရှိတဲ့ သုတ/ရသ ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေအပြင် အခြားအခြားသော ရသပိုင်းဆိုင်ရာ ၀တ္ထုတို၊ ၀တ္ထုရှည်၊ ဆောင်းပါး စတဲ့ စာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁၃။ ပွကြီး စာပေ ပွကြီးစာပေ ကတော့ ရှားပါးစာအုပ်တွေ၊ စာအုပ်အဟောင်းတွေကို နှစ်သက်တဲ့ စာဖတ်သူတွေ သဘောကျစေမယ့် စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှားပါး စာအုပ်အဟောင်းပေါင်း မြောက်များစွာကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်လို့ ရမယ့် နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၄။ နေစေးစာပေ နေစေးစာပေကတော့ စာအုပ်တိုက်အသီးသီးက ထုတ်ဝေလျှက်ရှိတဲ့ စာအုပ်များအပြင် ကာတွန်း၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ၀တ္ထု အပြင်ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်များ တိုက်ကျ စာအုပ်တွေကိုလည်း ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချပေးလျှက်ရှိတဲ့ စာအုပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅။ ACME (အမှတ်တရ ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်) ချည်ထည်စစ်စစ် (ဆိုးဆေးမသုံး) အ၀တ်အထည်တွေ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှူ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် စီမံထားတဲ့ အ၀တ်လျှော် ဆပ်ပြာ၊ လူသုံးကုန် ဆပ်ပြာတွေ၊ စာပေဆိုင်ရာ အကျီင်္လေးတွေ၊ ချည်ထည် အိတ်လေးတွေ အပြင် အခြား အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေပါ ရရှိနိုင်မယ့် နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆။ Cafe Min Tha Mee နိုင်ငံတကာမှာ ထင်ရှားတဲ့ ကော်ဖီအမျိုးအစားအားလုံးရရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို အအေးမျိုးစုံ၊ အဆာပြေစားနိုင်တဲ့ ကိတ်မုန့်လေးတွေနဲ့ မုန့်လေးတွေလည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်းအချက် လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဝယ်ပြီး ကော်ဖီလေးနဲ့ မြည်းစမ်းအရသာခံဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံး အပန်းဖြေနိုင်မယ့် ရပ်ဝန်းလေး တစ်ခုပါပဲ။ ၁၇။ New Life Food &...
SMART Translation & Interpretation Service - (English = Myanmar) ဘာသာပြန် ၀န်ဆောင်မှု katherineye2281@gmail.com...
Total views: 17764
THE KUMUDRA JOURNAL Address: No,112, 52nd Street, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar. Tel: (+95) 01 399921, (+95) 01 9010112 Fax: (+95) 01 399921 Email: kumudrajournal@gmail.com...
Total views: 17983
HOME - House of Media & Entertainment ဇာဂနာ ထူထောင်တဲ့ HOME - House of Media & Entertainment Launched on May 28, 2012 122,...
Myanmar Now သည် လွတ်လပ်သည့် သတင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်၊ တိကျပြီး ဘက်လိုက်မှုမရှိသော သတင်းများကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ တို့ဖြင့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဖော်ပြပေးလျှက်ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရန် Myanmar Now No 244/254 Room (52),...
Myanmar Journalism Institute - မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ ကို ဆက်သွယ်လိုလျှ င် info@mjimyanmar. org သို့လည်းကောင်း၊ ဖုန်းအမှတ် – ၀၉၂၅၄၃၈၄၆၆၀ သို့လည်းကောင်း၊ အိမ်အမှတ် B-2၊ အခန်း (၁၀၂)၊ ပုဂံအိမ်ယာ၊ ကျူံးကြီးလမ်း၊ (၁) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့  သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ website - http://www.mjimyanmar.org/ >http://www.mjimyanmar.org/ Lanmadaw Township...
Total views: 17790
>mobile phone in Burma